Ku soo dhowow Samoa | Wararka Safarka
Ku soo dhowow samoa
Mariela Carril | | Oceania, Maxaa la arkaa
Haddaan ka fikiro waxa ay noloshu tahay inay ahaato sida ku jirta Jannada Ma garanayo sababta laakiin waxaan had iyo jeer qiyaasaa jasiirad ku taal badda Baasifigga, oo leh qorrax, geedo timireed, biyo cad cad, ciid cadaan ah, neecaawda badda iyo nabad badan. ¿Samoa, laga yaabee?
Samoa ilaa gobol ka mid ah Boolisiya waana hubaal inaad maqashay janadan dabiiciga ah maxaa yeelay waxay leedahay koox awood badan oo ka mid ah rugby iyo muuqaal qurux badan. Waxaan u maleynayaa in safarka aadida Samoa markii masiibadan ay dhammaatay ay noqon karto daaweyn weyn. Maanta, Samoa iyo meelaha dalxiiska u dalxiis tago.
2 Dalxiiska Samoa
Sidaan soo sheegnay, waa dowlad madax-bannaan oo ku taal Polynesia iyo farsamo ahaan waxay ka tirsan tahay Oceania. Kahor intaysan yeelan magacyo kale, Jarmal Samoa iyo Western Samoa, laakiin laga soo bilaabo 1962 waxaa loogu yeeri jiray si fudud Samoa waana dowlad madax-bannaan (oo ka timid New Zealand). Waxay leedahay laba jasiiradood oo waaweyn, Sava'i iyo Upolu.
Dadkii ugu horreeyay ee deggenaa waxay ka yimaadeen Fiji qiyaastii 3500 oo sano ka hor, reer Yurubna waxay yimaadeen qarnigii XNUMX-aad, in kasta oo xiriirkan ugu dambeeyay uu si xoog leh uga dhacay qarnigii XNUMXaad gacantii Ingiriiska. Waxay lahayd waagii gumaysiga ku faafay Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka iyo Mareykanka.
Ilaa 1962 waxay ku hoos jirtay maamulka New Zealand. Maanta waa jamhuuriyad baarlamaani ah, oo lagu dhiirrigeliyey qaabka dawladda Ingiriisiga ah. Waa a dalka kiristaanka badanaa iyo mid kasta oo ka mid ah labada jasiiradood wuxuu u qaybsan yahay degmooyin kala duwan. Kuwani jasiiradaha ayaa asal ahaan ka soo jeeda fulkaanaha oo waxaa jira xoogaa jasiirado ah, oo dhammaantood ah sideed, agagaarka. Cimilada halkan waa kuleyl celcelis ahaan sanadkii waa qiyaastii 26ºC iyo roob badan oo u dhexeeya Noofambar iyo Abriil.
Samoa waxaa si fudud loogala xiriiri karaa Auckland seddex saac iyo bar duulimaad ahaan. Garoonka diyaaradaha ee laga soo galo Garoonka Caalamiga ee Faleolo, oo kaliya 35 daqiiqo u jirta caasimada dalka, Apia, jasiiradda Upolo. Halkan waxaad ka dhoofi kartaa ama ka duuli kartaa duulimaad kale jasiiradda Savai'i. Si aad magaalada u tagtid waxaad raaci kartaa bas ama taksi.
Ku wareegga jasiiradaha waa sahlan tahay maxaa yeelay waad awoodi kartaa kireysato gaari ama baaskiil ama mooto madaxbanaani ay helaan. Haddii kale waxaad mar walba isticmaali kartaa basaska dadweynaha, kaas oo kaliya aqbalaya lacag caddaan ah ama ku dhagan jadwal adag. Labada jasiiradood ee waaweyn waxaa isku xira a adeegga doonta Joogto ah oo qaadata dadka iyo gawaarida markii dambena, jasiiradaha yar-yar, waxaa lagu gaaraa doomo charter ah.
Aynu ku bilowno maxaan ka arki karnaa Upolu. Xeebta koonfur-bari ee jasiiradda waxaa ku yaal meel qurux badan, oo caan ka ah adduunka: a bohol ku taal badda dhexdeeda 30 mitir oo la yiraahdo To-SuaMeel aan caadi ahayn oo qurux badan oo lagu dabaasho oo ay ku hareereysan yihiin doog cagaaran iyo aragtiyo waaweyn oo badda ah. Waxaa jira barxad alwaax ah oo aad ka booddo oo gabi ahaanba waa qabow. Waxaad bixineysaa lacag si aad u gasho, laakiin ma seegi kartid.
Xeebta woqooyi waxaa jira mid kale barkadda dabiiciga ah Waxaa lagu aasaasay dhaqdhaqaaqa fulkaanaha waxaana lagu quudiyaa gu ’ka soo baxa god ku yaal badda hoosteeda. Biyaha waa nadiif saafi ah laakiin diirran godkuna waa weyn yahay. Ma jiraan wax ka fiican sida loo qubeysto halkan. Waxay ku saabsan tahay Barkadda Godka Puila, 26 kiiloomitir u jirta Apia ka dib wadada weyn ee xeebta.
Waxa kale oo aad booqan kartaa Matxafka Robert Louis Stevenson, qoraaga Jasiiradda qaaliga ah. Waxay ka koreysaa magaalada Apia waana guri qurux badan oo leh beero. Guri, runtii, halka uu ku noolaa qoraaga jaceylka Samoa. Jardiinooyinka dhexdooda qofku wuxuu booqan karaa sahaminta adoo raacaya dariiqa laba waddo oo xoog badan, oo kor u kaca illaa mid waliba soo bandhigo aragtiyo cajiiba.
Sidoo kale duleedka Apia waa Keydadka Badda ee Palolo, aag la ilaaliyo. Waxaad ku dabaalan kartaa boqol mitir xeebta, hareeraha reef, illaa aad ka gaarto quraaradda dabiiciga ah. Darbiga meeraha ah wuxuu ilaaliyaa oo xiraa janno biyo hoosaad qurux badan, oo aad u kala duwan, leh qoolleyda badda, shark iyo kalluunka kulaylaha. Waad kireysan kartaa qalabka wax lagu maydho oo dukaanku wuxuu u adeegaa cunno iyo cabitaanno iyo helitaanka xeeb leh hoy.
Xeebta, sidoo kale waxaa jira jasiirad yar oo qurux badan oo la yiraahdo Namua. Markaad u gudubto waxay ku qaadataa 10 daqiiqo oo keliya doon ka timid tuulada Lalomanu. waa meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay maalin seddexaadPo inuu ku hoydo aqallo ku yaal xeebta. Biyuhu way hooseeyaan oo waa deggan yihiin, waxaa jira diirto badda leh in kasta oo kalluumeysatadu ay ka soo kabanayaan Tsunami 2009, haddana wax walba durba waa kuwo aad u qurux badan oo xitaa socodka ku xeeran jasiiradda iyo buuraheeda waa kuwo cajiib ah.
Kahadalka Lalomanu xeebta waa caan, oo leh ciidiisa cad cad iyo seerayaal yaryar iyo qollo ay ku hoydaan. Goobaha loo dalxiis tago badanaa waxay leeyihiin habeen, riwaayad sheeko xariirooyin, guud ahaanna waa meel qoys loo tago.
Si aad u barato dhaqanka Samoan waxaad ka qeyb geli kartaa Fa'a Samoa adoo booqanaya Tuulada Dhaqanka ee Samoan ee Apia. Xeebaha kale ee quruxda badan ee caanka ah waa Xeebta Matareva iyo Xeebta Salamumu. Ugu dambeyntiina, waxyaabo kale oo badan waxaad sidoo kale ku dhex socon kartaa keymaha roobka, eeg biyo-dhaca, kalluunka, soo booqo Harada laydhka ee Lanoto'o, fuul buurta Fiamoe ...
Haddii aad rabto bad aad u jilicsan, waxaad ka heli doontaa meelo kale, laakiin waxaa jira, waana halkaan oo aad ku baran karto ama ku baran karto hawo-furka, labadaba Upolu iyo Savai'i oo deris la ah. Isagoo ka hadlaya jasiiraddan kale, Maxaan ku qaban karnaa Savai'i? Halkan, tuulada Satoalepai waxaad ku dabaalan kartaa qoryo cagaaran afduub ahaan oo hadhow la sii daayo. Gurigan xamaaliga ah waxaa maamula qoys maxalli ah oo ka qaata lacag yar gelitaanka goobta si ay u ilaaliso goobta waana saacad iyo badh kaliya markab ka yimaada Upolu.
Jasiiraddan waxaa ku yaal Garoonka Saleaula Lava, Mount Silisili ku dhowaad 1900 mitir sare oo ku wareegsan kaymaha roobka, ka Xeebta Manase, kuwa ugu caansan, ee Cape Mulinuu, ka Biyo-dhaca Pagoa, Monet Matavanu iyo aragtideeda quruxda badan ee dusha sare leh, godka biyaha ka soo daataan Alofaaga, Tafua god, Peapea Cave, tuubo fulkaane qalalan oo in kabadan kiilomitir ah xeebta, Mataolealel gugaama, Godka Dwarfs Paia, qiyaastii hal kiilomitir sidaa darteed waxaa lagu baarayaa hal maalin ama Guriga caanka ah ee Stone Stone.
Ugu dambeyntii, qaar kale oo ka mid ah macluumaad ku saabsan Samoa:
cimiladu waa mid qoyan oo kulul sanadka oo dhan. Waxaa jira xilli-roobaad laga bilaabo Nofeembar ilaa Abriil kan ugu sarreeya ee roobabkuna waa inta u dhexeysa Diseembar iyo Maarso.
Way ku habboon tahay in la helo caymis caafimaad si loo sameeyo booqashada.
Waa inaad cabtaa biyaha dhalada kujira lagana talaalaa asal ahaan talaalada aan iskaga siino reer galbeedka anagoo caruur ah. Waxaan qiyaasayaa in CXovid 19 sidoo kale dhawaan la dalban doono.
halkan waxaa ku yaal kaneeco marka dengue, zika iyo chukungunya ayaa jooga. Taasi waa sababta ay celintu muhiim u tahay.
dhulka dhexdiisa malaha xayawaan sun ah ama cayayaan.
Waad wadi kartaa laakiin waxaad ubaahantahay diiwaangelin qaran oo kuu gaar ah oo halkan ka dalbo ruqsad ku meel gaar ah oo si toos ah looga heli karo hay'adda kirada baabuurta.
inkasta oo kaararka deynta la aqbalo, way ku habboon tahay in wax badan la haysto lacag caddaan ah. Lacagta maxalliga ah waa log Samoan ah.
Axaddu waa muqaddas marka ma jiro socod furan.
gudaha Samoa waxaa kujira bandow salaada maqrib. Ayaa lagu magacaabay sa iyo guud ahaan waa inta udhaxeysa 6 iyo 7 pm. Gambaleel ama qolof qoyan ayaa yeeraya wuxuuna soconayaa in aan ka badnayn 20 daqiiqo. Inta lagu jiro waqtigan, iska ilaali inaad u gudubto tuulooyinka ama aad buuq yeelato.
Samoa uma baahna fiiso joogitaan kayar 60 maalmood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Oceania » Ku soo dhowow samoa
Buundada San Francisco